अमेरिकामा सबैथोक अनुशासन र समयको घेराभित्र हुन्छ । यो कुरा नेपाली बालबालिकाले सिक्नुपर्छ । | Ketaketi Online
Home » अमेरिकामा सबैथोक अनुशासन र समयको घेराभित्र...
posted by ketaketionline on Sun, 12/04/2016 - 08:17
यस पटकको केटाकेटी अनलाइन ३ प्रश्नमा वरिष्ठ लेखक रञ्जुश्री पराजुलीसँग कुराकानी गरिएको छ । लामो समय प्राध्यापन पेशामा सक्रिय रही अवकाश प्राप्त गर्नुभएकी लेखक पराजुली अहिले बालसाहित्य लेखनमा समर्पित हुनुहुन्छ । उहाँका कथा, समालोचना, निबन्ध र बालसाहित्यका थुप्रै कृतिहरु प्रकाशित छन् । बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपालका सल्लाहकार पराजुलीका ४० बढी बालकथाहरुको संकलन प्रकाशनको तयारीमा रहेको छ ।
१. साहित्यलेखनका बारेमा केही बताइदिनुस् न ।
मैले नेपाली साहित्यका विविध विधामा कलम चलाए तापनि मेरो रुचि खास गरेर बालसाहित्यमा छ । विगत साढे तीन दशकदेखि म यस क्षेत्रमा क्रियाशील छु । म बालसाहित्य रचना गर्दा आफू पनि रमाउँदै त्यसभित्र डुबुल्की लगाउँछु । प्राय प्रत्येक दिन जसो म केही न केही बालसाहित्य सिर्जना गर्दछु ।
२. बालसाहित्य लेखनमा कसरी आउनुभयो ? बालबालिकाले बालसाहित्य किन पढ्नुर्छ भन्ने लाग्दछ ?
बालसाहित्य बालपाठकको मानसिक मनोरञ्जनात्मक खुराक हो । अप्रत्यक्षरुपले यसले बालपाठककलाई बौद्धिक ज्ञान पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ । यही उद्देश्यका साथ म बालसाहित्य लेखनमा लागिरहेको छु । बालपाठकले त्यसबाट केही सिकून् र जानून् भन्ने लाग्दछ ।
३. अहिले अमेरिकामा बसिरहनुएको छ । त्यहाँका बालबालिकाबाट नेपाली बालबालिकाले के कुरा सिक्नुपर्छ र नेपाली बालबालिकाबाट अमेरिकी बालबालिकाले के कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ ?
यहाँ अमेरिकामा सबैथोक अनुशासन र समयको घेराभित्र हुन्छ । यो कुरा नेपाली बालबालिकाले सिक्नुपर्छ । परिवारभित्र सद्भावका साथ मान्यजनहरुको आदर गर्दै मिलिजुली बस्नुपर्छ भन्ने कुरा अमेरिकी बालबालिकाले नेपाली बालबालिबकाबाट सिक्नुपर्छ ।